Momba anay - LumLux Corp Co., Ltd.
LumLux Corp. dia orinasa teknolojia avo lenta natokana ho an'ny R & D, famokarana sy fivarotana ny HID sy ny LED mitombo ny jiro sy ny mpanera ary manome ihany koa ny vahaolana momba ny fananganana trano fonenana sy zavamaniry. Ny orinasa dia miorina ao amin'ny Panyang Industrial Park, Suzhou, mifanila amin'ny làlambe Shanghai - Nanjing sy ny làlambe Suzhou ary mankafy ny tambajotram-pifamoivoizana stereo-mety.
Hatramin'ny niorenany tamin'ny 2006, Lumlux dia natokana ho an'ny R&D amin'ny jiro avo lenta sy mpanamory jiro amin'ny famenon-jiro fanampiny amin'ny zavamaniry sy jiro ho an'ny daholobe. Ny vokatra jiro fanampiny dia nampiharina betsaka tany Eropa sy Amerika ary nahazo ny laza eran-tany ho an'ny indostrian'ny jiro ao Shina.
Miaraka amin'ny ozinina mahazatra manarona maherin'ny 20.000 metatra toradroa, Lumlux dia manana mpiasa matihanina maherin'ny 500 amin'ny sehatra samihafa. Nandritra ny taona maro, miankina amin'ny herin'ny orinasa matanjaka, ny fahaizan'ny fanavaozana tsy misy ratra ary ny kalitaon'ny vokatra tena tsara, Lumlux no mpitarika teo amin'ny indostria.
LumLux dia nifikitra tamin'ny filozofia amin'ny fidirana amin'ny fomba fiasa henjana amin'ny rohy famokarana tsirairay, miaraka amin'ny tanjaka matihanina hamoronana kalitao miavaka. Ny orinasa dia manatsara hatrany ny fizotry ny famokarana, manamboatra ny famokarana kilasy voalohany sy ny tsipika fitsapana, mitandrina ny fifehezana ny fomba fiasa miasa manan-danja ary mampihatra ny lalàna RoHS amin'ny fomba manodidina rehetra, mba hahatsapany ny fitantanana avo lenta sy avo lenta.
Miaraka amin'ny fivoaran'ny fivoaran'ny fambolena maoderina, LumLux dia hanohy mitazona ny filozofian'ny orinasa "fahamendrehana, fanoloran-tena, fahombiazana ary fandresena", fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miasa natokana amin'ny sehatry ny fambolena, hanao ezaka ho an'ny rahampitso tsara kokoa miaraka amin'ny fanavaozana ny fambolena.
fahitana: Fampiasana angovo mahira-tsaina hamoronana ho avy tsaratsara kokoa
Tonga mpamokatra herinaratra manan-talenta eran-tany, manome vokatra sy serivisy famatsiana herinaratra matanjaka sy mahomby
Ny mpampiasa mifantoka amin'ny zava-baovao dia mahatratra ny fanavaozana voalohany
Fahamendrehana, fifikirana, fahombiazana, fanambinana
Jiro mitombo hitombo, Fitaovana maivana taratra hazavana, Fahazavana mitombo fotsy, Jiro tariby feno spectrum,